ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola base Italiyane I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football genius ngegama lesidlaliso "Mimmo". Ibali lethu le-Domenico Berardi yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lobuntwana bakhe ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokuphakama kweDomenico Berardi. Imifanekiso yeCredits: Sportmirtese, Castrumcropalatum kunye EzemidlaloMole.
Uhlalutyo luquka ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yentsapho, ubomi bomntu, iinkcukacha zeentsapho, indlela yokuphila kunye nezinye izinto ezinokuthi aziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nokuguquguquka kunye neliso lakhe ngenjongo. Nangona kunjalo bambalwa kuphela abajonga i-Biography yaseDenenico Berardi enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Domenico Berardi wazalwa ngomhla we-1st ka-Agasti 1994 eCariati, idolophu ekwiphondo leCosenza kwingingqi yeCalabria ekumazantsi e-Itali. Ungoyena mncinci kubantwana abathathu ozelwe ngunina, uMaria kunye noyise, uLuigi.
UDomico Berardi wazalelwa kubazali okwaziwa kancinci ngaye. Ityala lemifanekiso: I-PxHere kunye ne-Sportmirtese.
Isizwe sase-Italiya sobuzwe obuMhlophe kunye neengcambu ezincinci ezaziwayo sakhuliswa kwidolophu yaseBocchigliero kwiphondo leCosenza e-Italy apho akhulele khona kunye nomntakwabo, uFrancesco kunye nodadewabo uSeverina.
UDomenico Berardi wakhulela eBocchigliero kwiphondo leCosenza. Ityala lemifanekiso: WorldAtlas kunye neMidlalo.
Ukukhula edolophini, uBerardi wayengekho mfutshane kwizizathu ezaziza kumnika ithuba lokudlala ibhola kunye nabahlobo bakhe phantse yonke imihla evekini. Ngamanye amaxesha wenza ngathi unesisu esibuhlungu ukuze abaleke esikolweni kwaye akonwabele ukudlala lo mdlalo.
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Ngombulelo ngokuzalwa kwintsapho ethanda ibhola, u-Young Berardi wabhaliswa kwisikolo seCastello sebhola ekhatywayo eMirto - iH hamlet yaseCrosia, ekwiPhondo leCosenza, e-Italiya - apho athabatha amanyathelo akhe okuqala kwibhola ekhuphisanayo.
UDenico Berardi wathabatha inyathelo lakhe lokuqala kumdlalo webhola ekhatywayo kwisikolo sebhola eCastello. Ityala lemifanekiso: Sportmirtese kunye ne-TUON.
Ngelixa wayeqhuba uqeqesho kwiSikolo, uBerardi wafunda kwaye wabonakalisa ubuchule obabubonisa imeko yakhe yokufumana amanqaku ephambili ezayo. Ngenxa yoko, umqeqeshi wakhe wayedla ngokunika amalungu eqela iqela ukuba alidlulisele kuye ngeenjongo eziqinisekileyo.
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
Ngeli xesha uBerardi wayeneminyaka eyi-13 kwi-2008, wahamba kakuhle waya kubahlobo bakhe e-Mirto ukuze abhalise kwi-football academy yeCosenza apho wayeya kuchitha ixesha elincinci lobutsha bakhe (2008-2010).
UDomenico Berardi ikhadi lokugqibela lesazisi ngaphambi kokuba ajoyine iCosenza. Ityala lemifanekiso: Sportmirtese.
Kwiveki enesiganeko, uBerardi wandwendwela ikhampasi eyunivesithi yomntakwabo uFrancesco eBodena. Ngelixa wayekwicampus, wazibandakanya nomdlalo wecala elinesihlanu kunye nomntakwabo kunye namanye amalungu aseyunivesithi. Engazi kuBerardi, kwabakho abantu ababevela kuSassuolo kwimidlalo eyayiqwalasele italente yakhe eluhlaza.
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Iindaba zokuBamba igama
Ke, u-Berardi oneminyaka eyi-16 waziswa eSassuolo apho anyuka khona phakathi kwamanqanaba. U-Berardi wenza i-dude yakhe kwiqela lokuqala leqela kwi-27th ka-Agasti 2012 ngexesha le-Serie B ngokuchasene noCesena kwaye waqhubeka nokuncedisa kwicala lakhe ukufumana ukunyuselwa kwiSerie A.
Nangona ukunyuka kukaBerardi kumasango kunokubetha abaninzi ngokukhawuleza, akubanga njalo ngaphandle kwezigqibo ezinzima. Umdlali webhola ekhulayo ngokukhawuleza wayenamaqela amaninzi eYurophu afuna ukusayinwa kwakhe. Nangona kunjalo, wazibona njengobudala kwaye wakhetha ukugqibezela inkqubo yokuvuthwa eSassuolo.
UDomenico Berardi wenza isigqibo sokuhlala eSassuolo nangona wayetsala iiklabhu ezinkulu ngefomu yakhe enomdla. Ityala lemifanekiso: I-Castrumcropalatum.
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukuphakama Kwigama leNdaba
Kwiminyaka elandelayo (i-2013 - 2015) iDenenico yangqineka ingoyena wabadlali bebhola abasebatsha e-Italy kwaye iphumelele amabhaso aliqela okubandakanya i-2015 yeBravo amabhaso omdlalo obalaseleyo webhola laseYurophu.
Yintoni egqithisile? Wayedweliswe kathathu njengomnye wabadlali abancinci be100 abasebatsha kwihlabathi nguDon Balon kwi2013, 2014 kunye 2015. Ukukhawuleza phambili kwixesha lokubhalwa, uBerardi ngugqirha-Sassuolo onamanqaku aphambili kunye nomdlali olandelwe kakuhle ngokutsala umdla ovela kwiRomania, Tottenham neLiverpool. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali.
UDomenico Berardi ngowona manqaku aphezulu kaSassuolo ngexesha lokubhala. Ityala lemifanekiso: ElisaManzini.
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubuhlobo boBomi boBomi
Ukuqhubela phambili kwimiba emalunga nobomi bothando bukaDenico Berardi, mangaphi amagama umntu anokufumana kwincwadi yakhe yebali lokuthandana kwaye ithini imeko yakhe yobudlelwane ngexesha lokubhala le bio?
Ukuqala, uBerardi akaziwa ukuba wayetshatile naliphi na ibhinqa ngaphambi kokuba ahlangane nentombazana awayethandana nayo (abe ngumfazi) - uFrancesca Fantuzzi. UFrancesca waqala wabona uBerardi ngexesha lomdlalo wolutsha emva koko wanxibelelana naye ngoFacebook. Zange bohlukane okoko kwaye banokwamkela (unyana) okanye intombi (intombi) nangaliphi na ixesha kungekudala.
UDomenico Berardi kwifoto yakhe ayithandayo nesithandwa sakhe uFrancesca Fantuzzi. Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi beNtsapho
UDomenico Berardi uhamba yedwa osuka kwimvelaphi yosapho olukumgangatho ophakathi. Sichaza iinyani malunga nobomi bosapho bakhe.
Malunga noyise kaDomenico Berardi: U-Luigi ngutata kaBerardi. U-Luigi wayengumntu othanda i-Inter Milan ngaphambi kokuzalwa kukaBerardi. Nangona kunjalo unendawo ethambileyo kaSassuolo edlalwa ngunyana wakhe. Utata oxhasayo wabathathu uye wanceda uzinzo lukaBerardi ngebhola kwaye uyaqhubeka nokumxhasa kude kube ngoku.
Malunga nonina kaDomenico Berardi: UMaria ngumama kaBerardi. Ungumfazi wendlu oncede ukukhulisa u-Berardi kunye nabantakwabo. Umama oxhasayo wabathathu unomdla kwibhola ekhatywayo. Ngapha koko, ungumxhasi weJuventus FC kwaye kunjalo, iklabhu yakhe yabantwana abancinci- uSassuolo.
UDomico Berardi wakhuliswa ngabazali okwaziwa kancinci ngaye. IiCredits zemifanekiso: ClipArtStudio kunye DlulisaMarket.
Malunga nabantakwaboDomenico Berardi: UBerardi unabantakwabakhe abadala. Babandakanya umntakwabo Francesco kunye no dade Severina. Nangona kungekho nto ingako yaziwayo malunga nabantakwabo, ayingabo abantu abasebenzela ezemidlalo njengeBerardi. Nangona kunjalo, bobabini bayayithanda ibhola kwaye balandele umdlalo kunye nomdlandla.
Malunga nezihlobo zikaDomenico Berardi: Kude kusapho lakwaBerardi, akukho nto ingako yaziwayo malunga noninakhulu wakhe oomama nootata noomalume bakhe, oomalume, abazala, abatshana kunye nabatshana bakhe.
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Iinkcukacha zobomi bomntu
Thetha ngobuntu bukaBerardi, une-Persona emangalisayo ebonisa imeko ethandekayo yabantu abakhokelwa nguLeo Zodiac Sign. Ngapha koko, ulungelelene, unomdla kwaye unyanisekile emhlabeni.
Umdlali odlalayo otyhila ngokuthe tye ulwazi malunga nobomi bakhe buqu kunye nabucala, unomdla kunye nezinto zokuzonwabisa ezibandakanya i-F1 racing, ukuhamba, ukuqubha, ukudlala imidlalo yevidiyo, ukumamela umculo kunye nokuchitha ixesha elisemgangathweni nosapho kunye nabahlobo.
UDenico Berardi unomdla kwimidyarho yeF1. Uyabona UCharles Leclerc kwifoto? Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Lifestyle Facts
Ngokumalunga nendlela uBerardi enza ngayo kunye nokuchitha imali, ixabiso lakhe lokugqibela lisephantsi koqwalaselo ngexesha lokubhalwa ngelixa ixabiso lakhe lentengiso lime kwi-X 20 yezigidi. Imimandla yobutyebi obuncinci bukaBerardi buqhubeka kwimali yakhe yemiholo kunye nemicimbi yokuxhasa.
Nangona umdlali odlalayo engakhawulezi atyebise ubutyebi bakhe ngokubonisa iinqwelo-mafutha zakhe ezintle kunye nezindlu, mkhulu xa esiya kwiiholide apho echitha khona imali kunye nexesha lakhe kunye nabahlobo bakhe.
U-Domenico Berardi ube nexesha elihle kwindawo yokuchithela ixabiso kunye nomhlobo wakhe uMarco Benassi. Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
Ibali lobuntwaneni bukaDomico Berardi kunye nebhayoloji eyona nto ayisongelayo yile nto incinci okanye incinci eyaziwayo malunga naye.
Inkolo: UDomenico Berardi akamkhulu kwinkolo ngelixa kungekho zikhombisi zikhomba iinkolelo zakhe ngexesha lokubhalwa. Ke ngoko ayinakuchazwa ngokugqibeleleyo ukuba ngaba ulikholwa okanye akakholelwa.
Iitattoos: UBerardi uthatha ubugcisa bomzimba njengokongeza oyimfuneko kwisibalo sakhe esihle. Ke, une tattoo enye enkulu engalweni yakhe yasekhohlo. Le tattoo ibonisa inombolo yehempe kaBerardi eyi-25 kwinkanyezi eneeroses. Ngaphantsi kwe tattoo sisixhobo esinjenge-ankile kunye neentambo.
Ukuqhubela phambili kwe tattoo ka-Domenico Berardi. Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
Ukutshaya kunye nokusela: UDomenico Berardi akaziwa ukuba ubheme ngexesha lokubhalwa. Izizathu zendlela yokuphila enjalo zisika umda kwibala lebhola ekhatywayo alilahlanga malunga nezibonelelo zokufumana indlela yokuphila esempilweni.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leDomenico Berardi yoBuntwana kunye neNqaku leBritold Biography. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
U-Emerson Palmieri Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UDaniele De Rossi Ingxelo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts